EZIGBO NRI ZURU ÒKÈ KWESỊRỊ ỊNA-ADỊGIDE N’ALA-IGBO GBURUGBURU – hoo!haa!!
EZIGBO NRI ZURU ÒKÈ KWESỊRỊ ỊNA-ADỊGIDE N’ALA-IGBO GBURUGBURU
– Dọkịnta Laz Ude Eze
Igbo bụ Igbo mma mmanụ! Rienụ! Ñụọnụ! Mụọnụ! Zụọnụ! Ka ọ gaziere anyị niile ọ kachasị oge ugbua, Ọrịa Koro kwụsịrị achụmnta akụnụba n’ọtụtụ ebe na mbaụwa.
Ndi bekee na-asị na “Onye agụụ jì bụ onye iwe jì”. Ndị ahụike na-ekwukwa na “onye agụụ bụ onye ọrịa”. Ewu na ọkụkọ ma na ahụike bụ ụba. Ndị íché dị n’etiti ọrịa na ụbịam dị ka imi na ọnụ. Nke a gosipụtara na ezigbo nri zuru okè so ná ihe na-edozi obodo. Kedu ihe bụ ezigbo nri zuru okè? Nke a bụ ọtụtụ nri dị iche iche nke ga-eju afọ, na-edozi ahụ ma dịkwa oge ọbụla a chọrọ ya.
Ndigbo na- akọ̀ ihe oriri dị iche iche dị ka ji, ede, osikapa, akpụ na ndị ọzọ. Ihe oriri ndị ọzọ na-enyere ndụ aka nke Ndigbo na-azụpụta gụnyere ahụekere , unere, oroma, ojoko, ero, nkwụ, udara, ụkpaka na ndị ọzọ. Ụmụ Igbo na-ázụ̀kwa anụmanụ dị ka ọkụkọ, ewu, ehi Igbo, ezi na ndị ọzọ. Ọtụtụ ihe oriri a na-eri n’Alaigbo bụ Ugwu Awụsa ka e si ebubata ya. Ha gụnyere agwa, tomato, anụ ehi, anụ ewu, na ndị ọzọ. Nri na anụmanụ anyị na akọpụta ma ọ bụ na azụpụta n’Alaigbo ọ bụ ihe zuru okè? E cheghi m na ọ dị òtù a.
Ọrụ ugbo na ọzụzụ anụmanụ ga-enyere Igbo aka. Ọ ga-eme ka ihe oriri na nke oñuñu baa ụba ma zukwaa òkè. Oge udu mmiri ebido la. Ọrịa Koro na eyi ndị mmadụ egwu. Azụmahịa adịghị ka ọ si adị na mbụ. Ego a gbaala ọsọ gbapụ n’ime akpa ọtụtụ mmadụ. Kedu ka ndị ọrụ ugbo ga-esi kọpụta nri n’uju n’oge a? Gọọmenti Steeti niile biko jụọ nụ ese ka unu mara ihe mere édè ji ebe nwịị.
Mmachi njem steeti na steeti mere na nri si Ugwu Awụsa abata Ala-Igbo gbo adịghịkwa ka ọ dị na mbụ. Nke a mere na ọtụtụ íhé oriri etinyela ego n’ala anyị. Agụụ na-apịazi ndị ogbenye ụtalị dị egwu. Nke a ga-eme ka nchekwa ime ahụ(immunity) ha daa mbà. Ọ nwere ike ime ka ọrịa Koro nyee ezigbo nsogbu n’Ala-Igbo ma ọ bụrụ na o nweghị ihe emere maka ya.
M na-arịọ gọọmenti steeti nakwa ndị ụlọ akụ ka ha nye ndị ntorobịa nkwado ka ha banye nnukwu ọrụ ugbo na ọzụzụ anụmanụ. Nke a ga-ewedata ọnụogugu ndị na-anọ nkịtị, mpụ na aghụghọ, izu ohi, igbu mmadu, na ihe ndị ọjọọ ndị ọzọ. Ọzụzụ ehi Igbo ga-enye aka chụọ ndị ọchị ehi si mba ọzọ juru ime ọhịa na-emebi ihe ndị be anyị kọrọ n’ugbo ma igbu mmadụ. Ọ bụkwanụ onye rijuru afọ na-aza akwaa akwụrụ.
Igbo ndị ọma, biko ka onye ọ bụla gbaa mbọ na-eriju afọ. Ka anyị chetakwa na ọ bụ áká ájá ájá na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ka anyị jiri ehihie chụọ ewu ojii. Ya gaziere Igbo niile.
Previous Post: ỌRỊA KORO AGBAWO NDỊ AMỤMA ASỊ NA-ARỤ ỌRỤ EBUBE ADIGBOROJA N’ANWỤ- AACHBISHỌỌPỤ CHUKWUMA
Next Post: NDỊ “ALMAJIRI AGADI” KA Ọ BỤ NDỊ AGHA ỌLỤỌ ỌLAA?